टेकु अस्प’तालको भुइँमै उप’चार गराइरहेका बि’रामी भन्छन् – कतै भर्ना लिएन ! – Yuwa Aawaj
बैसाख २९, २०७८ बुधबार 341
Prevरबि लामिछाने भन्नुहुन्छ : अहिले लाई अक्सिजन भन्दा ठूलो केही देखिन, भन्दै गराए यस्तो जानकारी ।
Nextतत्काल उडान खुल्ने आस मर्यो ! अब जुन १ तारिख मात्र खुल्ने आयो सुचना !
ब्राजिलमा को’भिड १९ बाट २४ घन्टामा ५९५ जनाको मृ’त्यु !
महामा’रीमा उपत्यकाका चार प्रहरी क’माण्डर ! का’लोबजारी रोक्नेदेखि अक्सिजन सिलिण्डर खोज्दै ।
ज्ञानेन्द्र शाही भन्नुहुन्छ : ९० प्रतिशत अर्थतन्त्र गोल्छा,संघाई,खेतान,दुगडहरुको हातमा, यसरी देश विकास हुन्न !
जनताको आ’क्रोश – कुलमान लाई नियुक्ति नगरि भोट माग्न आए,ओली लाई लखे’ट्ने चेता’वनी !